Zvinhu Zvinonakidza Kuita muChiang Mai | Couple yeMugwagwa
Mutauro Kudzidza Mazano eVatambi
Nzira Yokutanga A Kutora Blog
Zvinhu Zvinonakidza Kuita MuChiang Mai
August 18, 2019 / Leave a Comment
Chiang Mai, iyo yakakomberedzwa nemakomo mazhinji uye tembere, ndiro kuchamhembe guta reThailand. Inonzi ndiyo inonyanya nzvimbo yevashanyi yekuongorora tsika dzeThai voita zviitiko zvinonakidza. Heino runyorwa rwezvinhu zvinonakidza muChiang Mai, Thailand kuti mushanyi wese anofanira kuona kana kamwe chete muhupenyu.
Mari: Thai Baht (yakakomberedza 30 baht kusvika 1 USD)
Nzvimbo: Iyo Kumusoro capital yeThailand
Nguva yakanaka yekushanyira: Kubva muna Gumiguru kusvika Kukadzi (kupisa kwakanyanya munaKurume naApril)
Zvokufambisa: Overnight chitima, pamusoro peVIP Bhazi kana ndege kubva Bangkok
MaATM anowanikwa kwese kupi
Kushanyira Chiang Mai Marike
Kuona misika yemuno inzira yakakwana yekuongorora tsika dzevanhu pano. Kana uchiuya kumusika, iwe unozoona zvakanyanya zvekudya zvinoshandiswa nevanhu veko (nyama kana miriwo), nzira yavanotengesa nekutenga zvinhu, hunyanzvi, nezvimwewo.
MuChiang Mai, misika inoonekwa mukona yega yega yemugwagwa, mukati mevhiki kana pakupera kwevhiki, mukati mehusiku kana husiku. Kubva pakudya kwakabikwa kusvika kune imwe nyowani, kubva pants pants kuenda kune zvimwe zvigaro, uye zvichingodaro, zvese zvichakupa ndangariro dzisingakanganwiki. Heano mamwe emisika yakakurumbira muChiang Mail iwe unofanirwa kusvika kamwe:
Mugovera Manheru Musika: Kuve wakarongeka pakati pegedhi rekumaodzanyemba kweOld Pagoda neWua Lai Road, Mugovera Manheru Musika ndewekuti iwe utenge zvigadzikidzo uye zvipo zvekufamba.
Svondo Manheru Emusika: Unogona kutenga zvese kubva kune vatengesi muSunday Night Market, inotanga paTha Phae Gedhi uye inotambanudza nzira kuburikidza neRachadamnoen Road kuenda kuguta rekare.
Warorot Maketi (Kad Luang): Iri Musika wezuva revashanyi kuti vatenge zvipfeko zvinodhura nemidziyo yemumba.
Bor Sang (Umbrella Village) Musika: Vanhu pano vanotengesa maamburera akashongedzwa nemabasa emawoko.
Malin Musika: Ino inzvimbo yakakurumbira kuti vashanyi vadye kudya kwemanheru, enda kunotenga, utenge zvishongo uye zvipfeko, uye unakirwe nehunyanzvi hwemuno.
Kupinda MuMutambo weLantern
Chiang Mai vanozivikanwa nemitambo yavo yemwenje inonzi Loi Krathong uye Yi Peng. Chiitiko ichi chinonzi ndiyo nguva yakanakisa yekunakirwa nemashiripiti eguta. MunaNovember wemwedzi wega wega, vanhu vanotumira achiwedzera zviuru zvemwenje dzakavhenekerwa mumhepo ivo vari kugadzirira kunamatira hupenyu hunofadza nehupfumi. Nekudaro, kuti ubatanidze chiitiko ichi, iwe unofanirwa kubhuka mwedzi kana mavhiki pamberi. Zvakare, paunenge uchitsvaga zvekushandisa, ita shuwa kushandisa mao bamboo nekuti ane zvakatipoteredza hushamwari.
Kupedza awa uchitaura nemumongi uye kuvabvunza zvese nezvehupenyu hwezuva nezuva ichave chiitiko chinonakidza icho munhu wese anofanira kuedza. Mamo kubva kumatembere muChiang Mai anodisa kutaura uye akasvinura-mafungiro, saka ivo vachakupa iwe zano pamusoro penzira yekugadzirisa matambudziko ako zvinobudirira uye zvine musoro.
Kuti utaure mumonaki, iwe unofanirwa kusarudza tembere ne "Monk Chat" chirongwa chekutanga. Wobva wasvika ikoko Muvhuro, Chitatu kana Chishanu masikati (kubva ku5 pm kuenda ku7 pm) kusaina (iwe unofanirwa kunyora zita rako uye nyika yako) wobva wasangana nemamongi. Rangarira kupfeka zvipfeko zvakakodzera izvo zvinofukidza mabvi ako nemapfudzi apo iwe uri kuenda kunoshanyira tembere.
Kushanyira Doi Suthep Tembere
Kushanyira Chiang Mai pasina kuuya neDoi Suthep Tembere kukanganisa kukuru kune vese vashanyi. Izvi zvinofungidzirwa seimwe yeakanakisa tembere dzeThailand. Kana iwe ukauya pano pazuva rakacheka nyika, iwe unowana panoramic yekuona kweChiang Mai guta. Kuti ushanyire iyi tembere inozivikanwa nenzira yakasununguka, edza kuenda mangwanani-ngwanani kuti udzivise chaunga uye kupfeka shangu dzakagadzikana nekuti iwe unofanirwa kufamba kwakawanda.
Kuti usvike kuDoyi Suthep Tembere, chekutanga, bata rori tsvuku kubva kuguta kuenda kuDoyi Suthep. Zvinotora iwe nezve 60 Baht uye 45 mamineti ari muhombe kuti usvike kuchikomo. Wadaro, pedza 2 - 3 maawa kukwira kumusoro kwegomo, uko Doi Suthep Tembere inowanikwa.
Kuona nzou mudenga padhuze ndechimwe chezvinofanira kuita zviitiko muChiang Mai kunyanya uye Thailand zvakajairika. Kune mamwe makuru enzvimbo dzenzou dzaunogona kushanyira akadai seiyo Elephant's World muKanchanaburi, Elephant Nature Park, Mhando yeNyasha Elephant Sangment, zvichingodaro. Dambudziko nderekuti iwe unofanirwa kushanyira zvine musoro. Zvinoreva kuti iwe unofanirwa kutevedzera zvakadzama mirau yezviripo. Maitiro ako achabatsira kuunza nzou nevanhu vemuno hupenyu huri nani.
Imwe nzira yekuona nzou ndeyokupa Elephant Parade Nyika kushanya. Iyi imba yekugara yehukuru hukuru hwenzou, dzakapendwa nevatambi vekunze nevekunze. Iwe unogona zvakare kutenga idzi zvidhori sechiyeuchidzo chehama dzako neshamwari.
Kukwira Bua Thong Waterfalls (Iyo Inonamira Mapopoma)
Iwe unofunga kuti nzizi zhinji dzinotsvedza nekuda kwemabwe matombo uye inofamba ichimhanya mvura, handiti? Ichokwadi, asi Bua Thong mapopoma emvura muChiang Mai akasiyana. Ivo vakapfuma mune amamineral deposits, saka matombo akaoma. Iko inokutendera iwe kuti ukwire kumusoro usina tsoka. Kune zvikamu zvakasiyana zvemvura yemvura iwe yaunogona kukwira, asi iyo yakadzika kwazvo ndiyo inoshamisa kwazvo. Iko iko uko mvura inodonha makumi matatu emakumbo, saka ndeye nzvimbo yakanaka kuti utonhorere pazuva rinopisa. Mushure mekuridza madonhwe, unoona chitubu pamatanho akatarisana apo uchikwidza kumusoro. Iyo yakadzika bata nemvura yakajeka yebhuruu.
Kuti usvike kuBua Thong Waterfalls kubva kuChiang Mai, unogona kurenda mudhudhudhu uye kutyaira ikoko. Kana iwe usina chivimbo, kubata rori tsvuku ndiyo nzira yakanyanya kunaka.
Kuita Kurongeka Kwekudya Pakatenderera Chiang Mai
Chiang Mai inonyanyo kuzivikanwa nekuda kwekudya kwayo inonaka uye kunyange makirasi ekubikira. Pano, iwe unogona kuenda kumusika husiku kuti unakirwe nemhando dzakawanda dzehunyanzvi hwematunhu. Mafuta ari muChiang Mai anowanzove nezvinwiwa zvakaomeswa kana svutugadzike. Hezvino zvimwe zvekudya zvausingafanirwe kupotsa muguta rino:
Fried laab - nyama ine minzwa yakabikwa nezvinonhuwira zvemunharaunda
Khao soi - mupfumi weBurmese-anokonzerwa nekokonati curry soup, yakasaswa necrunchy noodles
Spicy minced nyama yenguruve nyudza dip
Nam ngiao - tangy matomatiki noodle soup pamwe nenguruve
Kutasira Kunotenderera Doi Suthep
Kunyange hazvo Chiang Mai riri guta rechina uye rakakura kwazvo nhasi Thailand, ichakomberedzwa nemakomo nesango. Naizvozvo, kana iwe uchida kugara padhuze, tora chikamu mumakomo ekufamba-famba murwendo. Izvo hazvingobatsiri iwe kudzidzira hutano hwako asi zvinounzawo iwe maonero akasiyana neChiang Mai.
Kupupurira Muay Thai Boxing Match
Kuona Muay Thai Bhokiseni Mechi inofanirwa kana iwe uine mukana wekusvika kuChiang Mai. Manheru, iwe unogona kutora chikamu mukirasi mukutamba. Zvese zviri kuyedza kirasi uye kutarisa mutambo zvinounza kwauri zvakakosha manzwiro.
Takuzivisa iwe zvinhu zvipfumbamwe zvinonakidza zvekuita muChiang Mai, Thailand. Izvi zvinhu zvakavimbiswa kuti zvinounza iwe zvisingakanganwike nguva mukati merwendo. Wakamboenda kuguta iri here? Kana hongu, govana nesu ruzivo rwako. Kana pasina, isu tinovimba chinyorwa chedu chakakubatsira. Kutenda nekuverenga.
Ini ndiri Emily Pham. Ini ndakazvarirwa muVietnam - nyika ine akawanda asingazivikanwe mahombekombe, nhoroondo nhoroondo, uye vashanyi zvinokwezva Kunzwisisa kuti Vietnam mazuva ano inzvimbo inozivikanwa yekuenda, ini ndinosimudza iyo blog webhusaiti ve.ro nechinangwa chekuunza kunaka kwakanaka kweVietnam kushamwari dzakatenderedza pasirese. Kana iwe uri kuronga rwendo rwekuenda kuVietnam, blog yedu inokupa ruzivo rwakakosha rwekuenda uye zvekuita munyika yedu.
Category: Asia, Guest Posts, Tairendi, Travel Planning Tags: Asia, chiang mai, guest posts, Tairendi
← Kwamuri Kuwana Fado Music In Lisbon, Portual
Yekupedzisira Cream Cheese Chinyorwa - Pairings, Matipi uye Zvimwe! →
Your kero e haangazozikamwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa *
Ndiziviseiwo kana mutsva wemashoko akawedzerwa.
Titsvai Pamasangano eZvenhau!
Shandura iyi Site!
Categories Select CategorypokugaraAfricaAirlinesAmericanAntarcticaAppetizerArgentinaArumeniyaArts & MusicAsiaOsitireriyaOsitiriyaAzabhaijaniwarBherujiyamuBorivhiyaBonairezimbabweBhuraziriBreakfast breakfastBritishCaliforniaCaribbeanCentral AmericaChileChinaKorombiyaKosita RikaVakaroorana KufambaCredit CardsCruisesKiyubaCulinaryCzech RepublicZuva RwendoDhenimakidhizetiEkwadhoEgyptbasaEnglandEuropeFamily TravelMukadzi ChifambiroFloridaFood uye DrinkFuranziFree AttractionsZvinhu ZvoseFrenchFrench GuianaGalapagos IslandsGeorgiaGeorgia (Europe)GermanJerimaniGirisiChiGirikiBoka RwendoGuatemalaGuest PostsHawaiiutanoMapepanishiHistoryHoliday TravelHondurasHotelsMunhu anobatsiraHungaryHangariAisirendiIllinoisIndiamuIndiyaIndonezhiyaInspirationalIowaAyarendiIrishItalianItariItinerariesJapaniKenyaMutauro KudzidzaLow CarbMadhagasikaZvakakoshaMaineKuita MariMarazhiyaMarudhivhuMassachusettsMexicanMekisikoMichiganMini-BlogMinnesotaMissouriMonakoMongoriyaMorokoMost PopularMozambikiNamibhiyaNetharenziNevadaNew YorkNyuzirendinhauNorth AmericaNorth CarolinaNorth DakotaOceaniaOregonpanzeParaguayPennsylvaniaPeruFiripainiPhotographyPorendiPutugaroPota RikoRecipesResortsReviewsRwendo RwendoRomaniyaRomanianRashiyaRussianSaladiScotlandScottishSelf ImprovementSEOSecheresSide DishSolo TravelSupuChamhembe AfrikaSouth AmericaSouth DakotaSpeiniSportsSurinameSiwidheniSwedishSiwizarendiTanzaniaTasmaniaTechnologyTennesseeTairendiTsikakutakuraTravel BloggingKushandisa BudgetingTravel DealsTravel GearTravel PlanningTunisiyaTekiUncategorizedUnited Kingdomnyika dzakabatanaUruguayVegetarianVenezuelaVermontVietnamVietnameseVirginiaWalesWashingtonWashington DCWisconsinZambiazimbabwe
Maawa e48 muMedellín: Mutungamiri weGuta reSingapera Spring
Enda kunzvimbo dzePaps uye Nzira dzeJack The Ripper muLondon
Best Bars muSan Francisco
Sipinachi uye Feta-Yakashongedzwa Portobello Mushrooms
American Asia Ositireriya Barcelona doro Bonaire vakaroorana Dublin England Europe Florida chikafu Furanzi Jerimani Girisi hotera Hotels Ayarendi ChiItalian Itari Lisbon Harare Mekisiko Miami mumhanzi Vakaridis itsva north america Paris Peru recipe Recipes ongorora Wongororo Roma south america Speini zvinhu zvekuita mazano kutakura famba kufamba gear kufamba urongwa travel tips nyika dzakabatana vienna
Copyright © 2019 · Kodzero Dzakachengeterwa · A Couple for the Road